Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Kacdoono Kabilowday Gobolka Liibaan Ee Wadanka Ogadenia.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Liibaan ee Koonfurta wadanka lagumaysto ee Ogadenia ayaa sheegaya in ay kabilowdeen kacdoono waawayn oo lagaga soo horjeedo maamul kusheega Gumaysiga wakiilka uga ah Ogadenia iyo cadaalad darada gaamurtay ee xukuumada wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelayno kacdoono waawayn oo ay dhalinta Gobolku soo abaabuleen ayaa maalin nimadii shalay oo Khamiis ahayd ka bilowday bagaalada Doollow ee dhacda xuduuda Kenya iyo Ogadenia, halkaas oo ay isugu soobaxeen dhalinyaro iyo dadwayne kale oo aad ubadan, kuwaas oo kudhawaaqayay erayo maamul kusheega Jigjiga kadhan ah.
Dadka shacabka ah ee mudaharaadayaasha ah iyo ciidanka Hawaarinta (Layuu Police) ayaa lasheegayaa in ay fooda is dareen, halkaas oo ciidanka cadawgu ay shacabkii rasaas huwiyeen, waxaana lasoo sheegayaa dhimasho iyo dhaawac badan.
Inta laxaqiijiyay ciidanka wayaanaha u adeega ee Layuu-ga ayaa dilay 5 qof oo shacab ah halka dhaawucuna uu aad ubadan yahay, sidoo kale waxaa lasheegayaa in ay xabsiga dhigeen dad badan oo shacab ah oo ay aad u jidh dileen.
Kacdoonada ayaa lasheegayaa in ay si dag dag ah ugu fideen magaalooyinka Boqol-mayo, Koolo, Malkaadiido, Filtu iyo meelo kale oo dhamaantood Gobolka Liibaan katirsan, waxaana lasaadaalinayaa in maanta oo Jumce ah ay dhici doonaan kacdoono kale oo shacab oo lagu diidan yahay gumaysiga iyo cawaantiisa.
Kacdoonada shacabka ee lagu diidan yahay cadaalad darada kajirta Ogadenia ayaa meelo badan oo Ogadenia ah kadhacay waxayna kacdoonadii ugu waawaynaa kadhaceen Gobolka Shiniile, qaybo kamid ah Gobolka Faafan iyo magaalada Qabridahare.